Maxey Tahay Sababta Arday Loogu Xukumay ( Dil Toogasho ) Kadib Filmka SQUID GAME Ey Daawadeen! - HALDOOR MEDIA
December 8, 2021 December 8, 2021 Haldoormedia	0 Comments	Squid game
Taxanaha aduunka qabsaday ee Squid Game labaxay oo shaashada aduunka qaasatan barta Netflix ka dhigay rikoor cajiib ah. Taxanahaan waxaa daawaday in ka badan 170 Maylan 28 maalmod ee igu horeysay barta Netflix. Waxaana soo saaray jilaayo oyo roraayo udhashay Kuuriyda koonfureed.
Filmkaan waxaa laga matalay ama lagu jilaayaa ciyaaro dhaqameen ama caruureed oo laga ciyaaro badanaa aduunka qaasatay wadanka Kooriya koonfureed. Dunida daafaheeda ayaa siweyn looga daawaday inta badana dadku wey la dhaceen inkastoo ahaay taxane aan caruurta ufiicneyn oo argagax galinaya maadaama ciyaaraha lagu jilaya haduu qofku uu guul dareysto waa la toganayaan.
Taxanaha Squid Game ayaa goordhow soo wada qeytii labaad ee fimkaas. Inta badan wadama aduunka waa laga daawadaa in yar mooyeen. Waqooyiga kuuriyaa waxaa dadka daawada lagu xukumaa dil toogasha ah. Waxaana ka dhacday qiso cajiib ah oo arday lagu xukumay dil iyo xabsi. Labadaan wadana ee markodii kore ahaay hal wadan hadana kala goostay ayaan waxaa dhaxtaalo cadaawad weyn. Sidoo kale leyskuma gudbin karo alaabaha caadiga ah. Sidaas darteen ayaa waxaa sharci uyaalaa waqooyiga Kooriya in dil toogasha ah la mariyo ruuxii wax soo galiya ey leedaha Koonfurta Kuuriya.
Daawo qisada oo dhameystiran muuqaal aanu ka sameynay: Hoos
← Abaaro: Dhaliyada Tiktok waxa ey muteysteen bilad sharafeed! dhanka barta Tiktok iyo caalamka iyo somalia
WAR DEG DEG! NATO IYO MAREEKANA OO KUSOO BIIRAY DAGAALKA RUUSHKA! →